Shwe Mann Interviews
အောငျပါစေ by ရှမေနျးတငျမောငျ Burmese dance song. Famous song by the late Shwe Mann Tin Maung, who was the most famous and popular dance artiste of zat-pwe after Pho Sein Gyi. He was the one and only dancer who was awarded Alinkar Kyawswar award. He was not only an accomplished dancer but also an excellent singer as evident in this famous song. Unfortunately, I have no pictures of Shwe Mann Tin Maung and have to use the pictures of other dancers for the video.
Shwe Mann Thu - Khin Maung Htoo Greetings. Welcome to Burmese MTV Channel. To keep receiving our new videos, Please subscribe our Channel either here or at http://www.BurmeseMTV.com We would like to share our music video from Myanmar (Formerly known as Burma) to all our fellow friends. We bought all these original contents to support our artists back in our country, So, if you like some of their video or music, We strongly suggest you to buy original materials to support artists from our country.
Myanmar watchers believe Myanmar's Parliamentary Speaker Thura U Shwe Mann isaleader in waiting. Channel NewsAsia's Glenda Chong spoke to him to find out how he feels about the difference between Thein Sein's reception in the US and that of Ang Sung Suu Kyi.
The "Thit Sar Myit Tar Shwe Mann Thabin" Dramatic art variety concert was held at the National Theater in Yangon on August 10, 2013. The concert, titled "Alinkar A Lwan Pyay Mat Tan", was presented by marking the 80th Anniversary of Shwe Mann Tin Maung's dramatic art performers group founding. Visit: http://www.myanmarcelebrity.com/ For More Myanmar Celebrities' News, Photos, Videos and Gossips.
Dedicated to all Burmese political prisoners for their freedom.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်နေတဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
ရွှေမန်းမာလာ-Shwe Mann Mar Lar မြန်မာသီချင်း၊မွန်သီချင်းများကို ဖုန်းစောင့်သီချင်းထဲ့သွင်းလိုပါက 084-656-8000 ပြီးလျှင်2ကိုနှိပ်ပါ
myanmar thingyan song Khin Mg Toe
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ ဒီကနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက် မြောက်နေ့၊ နောက်ဆုံးနေ့အပြီးမှာ လွှတ်တော်ကို တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်း မီဒီယာတွေနဲ့ မိနစ် ၃ဝ ကျော်ကြာ တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းချက်တွေကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA အဖွဲ့သား ကိုဂျေက တင်ပြထားပါတယ်။
Thura Shwe Mann (Burmese: သူရ ရှမေနျး, pronounced: [θùja̰ ʃwè máɴ]; born 11 July 1947) isaBurmese politician who was Speaker of the Pyithu Hluttaw, the lower house of parliament from 31 January 2011 to 29 January 2016. He isaformer general and was considered the third most powerful man in the State Peace and Development Council (SPDC), which ruled Myanmar until 2011. whilst beingaprotégé of senior general Than Shwe.
In May 2013, he replaced President Thein Sein as head of the ruling Union Solidarity and Development Party (USDP). That same year, he confirmed he would run for president in 2015. Amidst reports of tensions between himself and Thein Sein, he was removed from his post as head of the USDP in August 2015.
This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Shwe_Mann
This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Tin_Maung
Shwe Mann Tin Maung - Aung Par Sae အောငျပါစေ- Myanmar dance song
Shwe Mann Thu - Khin Maung Htoo
Interview- Thura U Shwe Mann
"Shwe Mann Thabin" Dramatic Art Performance
Shwe Mann Mar Lar
Interview with House Speaker U Shwe Mann
ရွှေမန်းမာလာ-Shwe Mann Mar Lar
House Speaker U Shwe Mann over PR Vote
Shwe Mann said that political prisoners would be free soon within few days.mp4
Shwe Mann said that political prisoners would be free soon within few days
U Shwe Mann Interview (part-1)
ရွှေကြေးစည်၊ Shwe Man Tin Maung
ဆို - ရွှေမန်းတင်မောင်
Thura Shwe Mann, House Speaker, visited Kachin State in mid February, including some refugee camps in Burmese government controlled areas. He then heldapublic meeting with Myitkyina residents on Feb 9, 2013, where he was grilled by pressing questions ranging from Burmese government's practices of Burmanization(through Burmese language as the only official language, Buddhism as the state religion and Chauvinism as the only Burmese identity or Burmeseness) since independence from Britain, its uncompromising stance to reject federalism in equal terms, increased number of Burmese troops from less than 50 before 1994 to more 100 in 2011 and ensuing appalling human rights abuses( such as gang rape, extra-judicial killings, unlawful arrests, torture, abduction and so on) and the Kachin people's rights to have control over resources in Kachin State and the Burmese army's monopoly on resources and economy asawhole. Only the first 35 minutes is worth listening to and the rest is questions on health and education needs and Burmese bureaucrats' usual boring dishonest answers. I salute the participants who confronted Thura Shwe Man. But as usual, Thura Shwe Mann, albeit attempt to portray himself asacivilian MP by saying that "I am notadictator and happy to listen to predicaments faced by the people of Kachin State," avoided answering most urgent question about unstoppable Burmese army's offensives. What does that mean? This tells the limit of Burmese generals led reforms: they could give some degree of freedom of expression as long as it does not disturb their agenda of reforms to legalize their rule. The disproportionate offensives (using fighter jets, chemical weapons, howitzers) against Kachin resistance army and indiscriminate killings of Kachin civilians while rushing to holdaceasefire talks shows the Burmese general's psyche: don't be tempted to resist us. You will only get bullets, mortar shells and ultimately be crushed in the most brutal way. But nevertheless, there is stilladoor open for you to avoid such atrocities. We(Burmese generals) are not as callous as you think and we are lenient if you want to accept our offer.
ရွှေမန်းချမ်းသာ သဘင် သက်တမ်း နှစ် (၄၀) ပြည့်ပွဲတော်
အလင်္ကာ ကျော်စွာ ရွှေမန်းတင်မောင် ၏ သားထွေး ရွှေမန်းချမ်းသာ သဘင် သက်တမ်း နှစ် (၄၀) ပြည့်ပွဲတော် နှင့် ပဒေသာ ဖျော်ဖြေပွဲကို စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Alinkar Kyaw Swar Shwe Mann Tin Maung's son, Shwe Mann Chan Thar Thabin 40th Anniversary Variety Concert was held at the National Theater in Yangon on September 8-9, 2017. #MyanmarThabin
ရွှေမန်းဆီသို့-Shwe Mann Si Tho
ရွှေမန်းဆီသို့-Shwe Mann Si Tho မြန်မာသီချင်း၊မွန်သီချင်းများကို ဖုန်းစောင့်သီချင်းထဲ့သွင်းလိုပါက 084-656-8000 ပြီးလျှင်2ကိုနှိပ်ပါ
ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို-Shwe Mann Taung Yate Kho
ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို-Shwe Mann Taung Yate Kho မြန်မာသီချင်း၊မွန်သီချင်းများကို ဖုန်းစောင့်သီချင်းထဲ့သွင်းလိုပါက 084-656-8000 ပြီးလျှင်2ကိုနှိပ်ပါ
Myanmar voters will go to the polls this fall in what could be the most important elections in the country’s history.
Thura Shwe Mann, House Speaker, visited Kachin State in mid February, including some refugee camps in Burmese government controlled areas. He then heldapublic meeting with Myitkyina residents on Feb 9, 2013, where he was grilled by pressing questions ranging from Burmese government's practices of Burmanization(through Burmese language as the only official language, Buddhism as the state religion and Chauvinism as the only Burmese identity or Burmeseness) since independence from Britain, its uncompromising stance to reject federalism in equal terms, increased number of Burmese troops from less than 50 before 1994 to more 100 in 2011 and ensuing appalling human rights abuses( such as gang rape, extra-judicial killings, unlawful arrests, torture, abduction and so on) and the Kachin peopl...
အောငျပါစေ by ရှမေနျးတငျမောငျ Burmese dance song. Famous song by the late Shwe Mann Tin Maung, who was the most famous and popular dance artiste of zat-pwe afte...
Shwe Mann Thu - Khin Maung Htoo Greetings. Welcome to Burmese MTV Channel. To keep receiving our new videos, Please subscribe our Channel either here or a...
Myanmar watchers believe Myanmar's Parliamentary Speaker Thura U Shwe Mann isaleader in waiting. Channel NewsAsia's Glenda Chong spoke to him to find out how ...
The "Thit Sar Myit Tar Shwe Mann Thabin" Dramatic art variety concert was held at the National Theater in Yangon on August 10, 2013. The concert, titled "Alinka...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်၊ အမေ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ ဒီကနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက် မြောက်နေ့၊ နောက်ဆုံးနေ့အပြီးမှာ လွှတ်တော်ကို တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်း မ...
Thura Shwe Mann, House Speaker, visited Kachin State in mid February, including some refugee camps in Burmese government controlled areas. He then heldapublic...
အလင်္ကာ ကျော်စွာ ရွှေမန်းတင်မောင် ၏ သားထွေး ရွှေမန်းချမ်းသာ သဘင် သက်တမ်း နှစ် (၄၀) ပြည့်ပွဲတော် နှင့် ပဒေသာ ဖျော်ဖြေပွဲကို စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ရန်...
U Shwe Mann Interview (part-2)
BBC interview with Shwe Mann September 2017
This video is about Shwe Mann
RFA Interview with House Speaker Thura U Shwe Mann
အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ John Boehner ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင် သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
Exclusive Interview: Myanmar House Speaker Thura U Shwe Mann in Thailand
Bangkok-based Nation Group's Reporter Onravee Tangmeesang exclusively interviews Myanmar's House Speaker Thura U Shwe Mann during his official visit to Thailand. FB: Onravee Tangmeesang Twitter: @natty_tang
An Interview with Nyunt Win, Shwe Man Tin Maung's Eldest Son, Movie Actor,7Academy Awards Winner
အလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်းတင်မောင်၏ သားအကြီး၊ ဦးညွှန့်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျူး အင်တာဗျူးသူ - Rachel Cooper, Kit Young (စန္ဒယားခင်ခင်လေး) ဂီတမိတ်မြန်မာဂီတစုဆောင်းမှု
Aung Zaw, Editor of Irrawaddy interview with U Shwe Mann, Speaker of Lower House of the Parliament of Burma in Naypyidaw.
Shwe Mann Speech
Amendment of Shwe Mann Commission Duties and Responsibilities
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ သဘောထား ရယူရာမှာ.. သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသိန်းက ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုသန့်ဇင်ဦး တင်ပြထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့: Subscribe on YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/...
U Shwe Mann meets with reporters
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ ဒီနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အပြီးမှာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်း က တင်ပြထားပါတယ်၊
Myanmar House Speaker U Shwe Mann at Wilson Center
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အပါအဝင် မြန်မာ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ တည်ဆဲဥပဒေ မှန်သမျှကို လွှတ်တော်က လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်၊ အစားထိုးသွားမယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောလိုက် ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က Woodrow Wilson Center မှာ မနေ့က ကျင်းပ တဲ့ "မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့အမြင်" ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အခုလို ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က တင်ပြထားပါတယ်၊
Press Conference of House Speaker U Shwe Mann
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ လွှတ်တော်နောက်ဆုံးနေ့အစည်းအဝေး အပြီးမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီးနောက်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မသီရိမင်းဇင်က ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။
Thura Shwe Mann Campaigns in Phyu, Bago Region
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ သူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ မကြာခဏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းပါတယ်။ မနေ့က မဲဆွယ်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီတွင်းကိစ္စနဲ့ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေတွေကို သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းရာမှာ ဦးရွှေမန်းက ပြန် လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးဇော်ကို တင်ပြထား ပါတယ်။
အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ John Boehner ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး...
Bangkok-based Nation Group's Reporter Onravee Tangmeesang exclusively interviews Myanmar's House Speaker Thura U Shwe Mann during his official visit to Thailand...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၇ နိုဝင်ဘ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ သဘောထား ရယူရာမှာ.. သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသိန်းက ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုသန့်ဇင်ဦး တင်ပြထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့: Subscribe on YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/RFABurmese YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE75dgnEYPacknHHg3a3sJg Soundcloud: https://soundcloud.com/burmeserfa တယ်လီဖုန်းအတွက် RFA Burmese Mobile App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.bbg.rfa&hl=en Apple: https://itunes.apple.com/us/app/radio-free-asia-rfa/id744921169?mt=8
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ ဒီနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အပြီးမှာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်း က တင်ပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အပါအဝင် မြန်မာ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ တည်ဆဲဥပဒေ မှန်သမျှကို လွှတ်တော်က လ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ လွှတ်တော်နောက်ဆုံးနေ့အစည်းအဝေး အပြီးမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီးနောက်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ သူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ မကြာခဏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းပါတယ်။ မနေ့က မဲဆွယ်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွ...
ရွှေမန်းချမ်းသာ၏သဘင်သက်တမ်း နှစ်၄၀ပြည့်ဖျော်ဖြေပွဲ PART 1
1. Rare Actor Like Me
Ngar Lo Min Tharr Kabar Sharr Speaker :B.Ed Aung Thite, Pachi Lay Win, Shwe Mann Kyaw Aung, Kyarr Khin Sein, San San Nwae, Min Hla Than Htun Min
Shwe Munn Tha Bin
Aung Pyae Shan
Thura U Shwe Mann's Goodwill Visit to Vietnam
Speaker of Union Parliament Thura U Shwe Mann's Goodwill Visit to Vietnam.
မြန်မာဇာတ်ကား-နှမပေးစီမံကိန်း -နေဒွေး ၊ ဒိန်းဒေါင် ၊ သွန်းဆက်
စင်္ကာပူရောက် ရွှေမန်းသဘင် ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ - ပထမနေ့ ဒုတိယပိုင်း (2 of 2)
Shwe Man Thabin Dance Theatre (Myanmar) Traditional Dance From Asia Rasas – Splendours of Burmese Zat Pwe Esplanade Outdoor Theatre, Singapore 21 Oct 2016 : 8.45pm
Sayadaw Shwe Mann U Thuria, Aggamaha Kamatthana Cariya: "About the Past" Tayardaw,
SF Bay Area Myanmar Community Meets Thura Shwe Mann & Delegation Myanmar Pyithu Hluttaw # 2
Video : Eagle video group. Sound : Harry Chin Live Video Streaming: Shwe Video Media Group.
Burmese TV Magazine - August 1st Week Program
Top news from Burma and around the world - Thura U Shwe Mann, speaker of Myanmar's House of Representative, took over the alternate seat of Speaker of the two-House Union Parliament; Speaker of the House of Commons, UK Parliament Mr. John Bercow visits Myanmar; France clears Myanmar 50% of debt owed to the European country; China opens pipeline to transport gas from Myanmar; President Obama assigns Senators Lindsey Graham and John McCain to travel to Egypt; Russia grantedatemporary asylum to Snowden; Pakistani lawmakers elected Mamnoon Hussain as Pakistan's new president; Record high temperature heatwave hit China; Exclusive Interview: VOA talks to U Tin Myint Aung, Burmese national football team manager on preparations for the upcoming SEA Games; ; and the Rainbow Entertainment News -...
Nyi Daw Min Nan Chut Khan (ညီတော်မင်းနန်ချွတ်ခန်း) Win Bo & Shwe Man Tha Bin
ညီတော်မင်းနန်ချွတ်ခန်း ၀င်းဗိုလ်နှင့် ရွှေမန်းဇာတ်သဘင်အဖွဲ့ ဂီတမိတ်မြန်မာဂီတစုဆောင်းမှု
ရွှေမန်းသဘင် ရဲ့ စင်္ကာပူ ဖျော်ဖြေပွဲ - တတိယနေ့ ဒုတိယပိုင်း (1 of 3)
Shwe Man Thabin Dance Theatre (Myanmar) Traditional Dance From Asia Rasas – Splendours of Burmese Zat Pwe Esplanade Outdoor Theatre, Singapore 23 Oct 2016 : 8.00pm
မြန်မာတို့အတွက် မြန်မာဇာတ်ကားသစ်များ ရုပ်သံကြည်လင်စွာဖြင့် နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသည်။ Publish new Myanmar movies for Myanmar people everyday. Please subscribe Mahar channel NOW. အခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ပါ။ ဇာတ်ကားအစအဆုံးကိုတော့ ရွှေမြန်မာရဲ့ ဖုန်း/ တက်ဘလက်မှာ Mahar မဟာ အပလီကေးရှင်းကို install လုပ်ပြီး ခံစား ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv https://itunes.apple.com/us/app/mahar/id1037697766 https://www.youtube.com/mahartv https://www.facebook.com/mahartvnetwork APK : http://pc.cd/nKtctalK * 2016®mahartvinfo@gmail.com * Official Online Myanmar Movie * Subscribe Now!
Just Before 8 Jun 2012 - Maung Gyi Daunt VT, BTD
Public Speech in Rohingya language on Citizenship & Human Rights in Maung Gyi Daunt VT of Buthidaung in May 2012.
မြန်မာဇာတ်ကား-လှတောကဘချောနဲ့ရွှေမန်းကမေစန်း-နေထူးနိုင်၊ ချစ်စနိုးဦး၊ အေသင်ချိုဆွေ
Phwar Daw Mu Khan (ဖွားတော်မူခန်း) Shwe Man Tin Maung
ဖွားတော်မူခန်း အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းတင်မောင်နှင့်အဖွဲ့ ဂီတမိတ်မြန်မာဂီတစုဆောင်းမှု
Discuss By Thura U Shwe Mann Part-3
29/03/2013 ဆစ်တနီမြို့တွင်ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဌဦးလှမြင့်ဦး၊ သြစတြေးလျဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ဦးမင်းသိန်းတို့နှင့် ဆစ်တနီမြို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှား သူတို့၏ ဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Shwe Man Thabin Dance Theatre (Myanmar) Traditional Dance From Asia Rasas – Splendours of Burmese Zat Pwe Esplanade Outdoor Theatre, Singapore 21 Oct 2016 : 8.4...
Top news from Burma and around the world - Thura U Shwe Mann, speaker of Myanmar's House of Representative, took over the alternate seat of Speaker of the two-H...
Top news from Burma and around the world - Thura U Shwe Mann, speaker of Myanmar's House of Representative, took over the alternate seat of Speaker of the two-House Union Parliament; Speaker of the House of Commons, UK Parliament Mr. John Bercow visits Myanmar; France clears Myanmar 50% of debt owed to the European country; China opens pipeline to transport gas from Myanmar; President Obama assigns Senators Lindsey Graham and John McCain to travel to Egypt; Russia grantedatemporary asylum to Snowden; Pakistani lawmakers elected Mamnoon Hussain as Pakistan's new president; Record high temperature heatwave hit China; Exclusive Interview: VOA talks to U Tin Myint Aung, Burmese national football team manager on preparations for the upcoming SEA Games; ; and the Rainbow Entertainment News - colorful tidbits of international popular celebrities and Hollywood superstars.
Shwe Man Thabin Dance Theatre (Myanmar) Traditional Dance From Asia Rasas – Splendours of Burmese Zat Pwe Esplanade Outdoor Theatre, Singapore 23 Oct 2016 : 8.0...
29/03/2013 ဆစ်တနီမြို့တွင်ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဌဦးလှမြင့်ဦး၊ သြစတြေးလျဆိ...
အောငျပါစေ by ရှမေနျးတငျမောငျ Burmese dance song. Famous song by the late Shwe Mann Tin Ma...
Shwe Mann Thu - Khin Maung Htoo Greetings. Welcome to Burmese MTV Channel. To keep r...
Myanmar watchers believe Myanmar's Parliamentary Speaker Thura U Shwe Mann isaleader in ...
The "Thit Sar Myit Tar Shwe Mann Thabin" Dramatic art variety concert was held at the Nati...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်...
ရွှေမန်းမာလာ-Shwe Mann Mar Lar မြန်မာသီချင်း၊မွန်သီချင်းများကို ဖုန်းစောင့်သီချင်းထဲ့သွင်း...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ ဒီကနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက် မြောက်နေ့၊ နောက်ဆံ...
Latest News for: shwe mann
(AP) — Devin Mann drove in three runs, Adam Wolf struck out nine and Louisville beat Duke 9-2 on Friday to advance to the semifinals of the Atlantic Coast Conference Tournament....
Long after she left Baltimore for Chicago asateenager, Carol Mann loved coming back to her adopted hometown. Long after she became one of golf’s biggest stars — and personalities — Mann seemed at home in Baltimore. Mann, who was born in Buffalo, N.Y., and died Sunday at age 77 at her longtime home in the suburbs of Houston, hadadeep connection to the city and its golfing community ... I never think how people will remember Carol Mann....
Palghar bypoll ... Yogi Adityanath, Uddhav Thackeray face-off raises poll&nbsp;fervour. THROWING HIS weight behind tribals opposed to giving up their land to make way big ticket infrastructure projects in Palghar, Shiv Sena president Uddhav Thackeray on Friday said that Prime Minister Narendra Modi had failed to tap the ‘Mann ki Baat’ of the local residents ... This is their ‘mann ki baat’ and yours is ‘monkey ki baat’,” he added ... Tags ... ....
CBSE 12th result 2018. How to checkFuel up your car insurance. A policy that covers all your basic requirementsTaking right care of your two-wheeler requires more than just regular service. Aap ko neta badal kar kya mila, Lokhit ka ik naya wada mila. (What did you achieve by changing the leadership? Justanew promise of social welfare) ... His first collection of Hindi ghazals, Pipasait Mann, released this week ... More Top News ... Advertisement. ....
အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ John Boehner ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ရောက်ရ...
Bangkok-based Nation Group's Reporter Onravee Tangmeesang exclusively interviews Myanmar's...
အလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်းတင်မောင်၏ သားအကြီး၊ ဦးညွှန့်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျူး အင်တာဗျူးသူ - Rachel ...
Aung Zaw, Editor of Irrawaddy interview with U Shwe Mann, Speaker of Lower House of the Pa...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ တာဝန်...
Thura Shwe Mann, House Speaker, visited Kachin State in mid February, including some refug...
Myanmar voters will go to the polls this fall in what could be the most important election...
Ngar Lo Min Tharr Kabar Sharr Speaker :B.Ed Aung Thite, Pachi Lay Win, Shwe Mann Kyaw Aun...
Shwe Man Thabin Dance Theatre (Myanmar) Traditional Dance From Asia Rasas – Splendours of ...
Video : Eagle video group. Sound : Harry Chin Live Video Streaming: Shwe Video Media Grou...
Top news from Burma and around the world - Thura U Shwe Mann, speaker of Myanmar's House o...
Meeting With Thura Shwe Mann, House Speaker, in My...
Myanmar Votes 2015: A Conversation With Thura Shwe...
ရွှေမန်းချမ်းသာ၏သဘင်သက်တမ်း နှစ်၄၀ပြည့်ဖျော်ဖြေပွဲ ...
1. Rare Actor Like Me...
Shwe Munn Tha Bin...
Thura U Shwe Mann's Goodwill Visit to Vietnam...
မြန်မာဇာတ်ကား-နှမပေးစီမံကိန်း -နေဒွေး ၊ ဒိန်းဒေါင်...
စင်္ကာပူရောက် ရွှေမန်းသဘင် ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ - ပထမနေ့ ဒ...
Sayadaw Shwe Mann U Thuria, Aggamaha Kamatthana Ca...
SF Bay Area Myanmar Community Meets Thura Shwe Man...
Burmese TV Magazine - August 1st Week Program...
Nyi Daw Min Nan Chut Khan (ညီတော်မင်းနန်ချွတ်ခန်း)...
ရွှေမန်းသဘင် ရဲ့ စင်္ကာပူ ဖျော်ဖြေပွဲ - တတိယနေ့ ဒုတိယ...
Just Before 8 Jun 2012 - Maung Gyi Daunt VT, BTD...
Phwar Daw Mu Khan (ဖွားတော်မူခန်း) Shwe Man Tin Ma...
Face to Face (Irrawaddy)...
Discuss By Thura U Shwe Mann Part-3...
Mann, Wolf lead Louisville past Duke 9-2 at ACC tourney ... Devin Mann drove in three runs, Adam Wolf struck out nine and Louisville beat Duke 9-2 on Friday to advance to the semifinals of the Atlantic Coast Conference baseball tournament ... (AP) — Devin Mann drove in three runs, Adam Wolf struck out nine and Louisville beat Duke 9-2 on Friday to advance ......
Norwell senior second baseman Garrett Weybright (middle) convertsadouble play in the fifth inning against Jay County ... (Photo by Tim Reyes). By PAUL BEITLER ... The Patriots tooka2-0 lead in the first inning, as starting Norwell pitcher Caden Mann walked four and hitabatter ... Mann gave upawalk to open the second inning and was replaced by Louison ... Mann did not give upahit but allowed two runs on five walks andahit batsman....
Pippa Mann, of England, talks with Dale Coyne after she failed to make the field for the IndyCar Indianapolis 500 auto race at Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis, Saturday, May 19, 2018 ... Series regular James Hinchcliffe was the big surprise to miss the show, but he was joined on the sideline by Pippa Mann, who mostly races sports cars but has managed to put togetheraone-off ride the last few years with Dale Coyne Racing....
BC-CAR--Indy 500-Finding A Ride,914 ... Even then, landingaride is no sure thing, as Pippa Mann learned just this week ... Series regular James Hinchcliffe was the big surprise to miss the show, but he was joined on the sideline by Pippa Mann, who mostly races sports cars but has managed to put togetheraone-off ride the last few years with Dale Coyne Racing. Mann did everything right ... "It's the worst feeling in the world," Mann conceded ... ....
Johnson was convicted in 1913 by an all-white jury for violating the Mann Act for traveling with his ......
FILE - In this Thursday July 31, 2008 file photo, Christopher Jarecki and Alicia Silverstone arrive at the premiere of "Pineapple Express" in Mann Village Theater in Los Angeles. Alicia Silverstone is divorcing her husband of nearly 13 years. The ... ....
Duringavisit to Chicago’s Graceland Cemetery with the Rev ... Johnson was convicted in 1913 by an all-white jury for violating the Mann Act for traveling with his white girlfriend ... Jeffries. ___. Information from ... All rights reserved ... ....
“BCB are growing all the time ... The graduate of Pleck Boxing Club, who he represented on 80 occasions, will continue to train out of Great Wyrley Boxing Club under Pete Hickenbottom but will visit BCB HQ for regular sparring and fitness sessions with trainers Paul Mann and Ben Wilkes....
Shama, who is fondly remembered as Pooja from the show "Yeh Meri Life Hai", ventured into Bollywood in 1998 with "Prem Aggan" and was also seen in superstar Aamir Khan starrer "Mann" in 1999.&nbsp;. Asked what is keeping her away from the big screen, Shama told IANS in an e-mail interview from Mumbai ... ....